नेपालबाट दुबई गएर यि ४ युवतीहरुले के गरे यस्तो ? आफ्नो दुबईको ठेगाना नै दिएर के गरे यस्तो ? भिडियो भाइरल – Gazabkonews
नेपालबाट दुबई गएर यि ४ युवतीहरुले के गरे यस्तो ? आफ्नो दुबईको ठेगाना नै दिएर के गरे यस्तो ? भिडियो भाइरल
निकै नै सुन्दर एक युवतीको बाथरुम भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ति युवतीले बाथरुममा छिरेपछि के(के गरिन्, त्यो सबै एक गो’प्य क्या’मेरामा कै’द गरिएको थियो । के छ भिडियोमा रु एक यु’वती बा’थरुममा प्रवेश गर्छिन् । ढोका बन्द गर्छिन् । त्यसपछि पालैसँग तल(माथिको दुवै कपडा खोलेर झुण्ड्याउँछिन् । अब उनको श’रीरमा ब्ल्याक वान पिस ड्रेस मात्र बाँकी रहन्छ । त्यो पनि खोल्न लागेजस्तो गर्छिन् ।
बुडापाकाहरु को एउटा पुरानो भनाई गाउघरमा सुनिरहनु भएकै छ होला नि चालिसे लागेछ बैस जागेछ । यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन् । बुडापाकाका अनुसार जीवनमा पहिलो पटक १६ वर्ष र दोस्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे । हाम्रो समाजमा कहिकतै महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहेको घटनाहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।